कति छ सम्पति प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पति ? यस्तो बुझाए विवरण
बुधबार, ९ जेष्ठ, २०७५
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद गठन भएको तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
ओलीको सम्पत्ति विवरणमा २ वटा घर, १८ तोला सुन र बैंकमा ४२ लाख आदि देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उक्त विवरणमा ओलीको सम्पती श्रीमती राधिका शाक्यको नाममा छ । जसमा २ वटा घर छन् ।
२ कित्ता जग्गा, एउटा १ रोपनी र अर्को डेढ रोपनी छ । ओलीको झापाको पृथ्वीनगरमा १० कठ्ठा जग्गा छ । ओलीसँग करिब १८ तोला सुन पनि रहेको पनि सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै ओलीकी श्रीमती राधिकाको नाममा ३ वटा बैंकमा खाता छन् । माछापुच्छे बैकमा ४ लाख, प्रभ बैंकमा ६ लाख, राष्ट्रिय वचतपत्रमा २५ लाख रुपैयाँ लगानी छ ।
काठमाडौँ मेरिएट होटल सञ्चालनमा आयो
काठमाडौँ । राजधानीमा “काठमाडौँ मेरिएट होटल” संचालनमा आएको छ । यो सँगै नेपालमा मेरिएट होटलको फ्ल्यागसीप ब्राण्डको डेब्यू भएको छ । आधुनिक यात्रुहरुलाई विस्तार गर्न डिजाइन गरिएको प्राइम लोकेसनमा अवस्थीत
अमेरिकाले आफ्नै ड्रोनलाई इरानी ड्रोन भनेर ध्वस्त गरेपछि...
एजेन्सी । अमेरिकाले झुक्किएर आफ्नै ड्रोन खसालेको इरानका उपविदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीले बताएका छन् ।
डी लिट्ट किन बार्सिलोनाको अफर लत्याएर युभेन्ट्स गए ?
एजेन्सी । इटालियन क्लब युभेन्ट्सले नेदरल्याण्ड्सका युवा खेलाडी माथिस डी लिट्टलाई भित्र्याएका छन् । उनलाई स्पेनिस क्लब बार्सिलोना र फ्रान्सेली क्लब पीएसजीले अफर गरेको भए पनि उनी इटालियन घरेलु लिग विजेत